iphone မွာ lock & unlock ဘယ်လိုခွဲခြား ရပါသလဲ?? — MYSTERY ZILLION
iphone မွာ lock & unlock ဘယ်လိုခွဲခြား ရပါသလဲ??
Lock ဖြစ်တယ်ဆိုရင် network တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ သုံးလို့ရပါတယ်... တခြား network က sim card တွေနဲ့ သုံးလို့မရပါဘူး... ဥပမာ O2 lock လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းဆိုရင် O2 network နဲ့ပဲသုံးလို့ရပါတယ်...
Unlock ဆိုတာကတော့ ဘယ် network က sim card နဲ့မဆို သုံးလို့ရပါတယ်...
ဒီတော့ ကျွန်တော်စမ်းတာကတော့ network မတူတဲ့ sim card တွေထည့်စမ်းတာပါပဲ... သုံးလို့ရရင်တော့ အဲဒီဖုန်းက unlock ဖုန်းပေါ့...
(ထင်ရာမြင်ရာတွေ ပြောသွားပါတယ်... ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်မှာပါ... )
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်တယ် ကိုမိုးကြီးရာ...
ဖုန်းဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဖုန်းထဲမွာ ဘယ်လိုကြည့်ရတာလဲခင်ဗျား.....
You can look iPhone 4G / 4S by iPhone Box back ... if u see at&t logo it'salock phone... if u can't not see at&t logo it'saunlock phone
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1346/apple-iPhone4-2.jpg << this back cover is locked phone with at&t logo
It might not true for all iPhone. There will be other locked iPhone from different countries and different providers.
ho yes... i mean from USA Brand
ဘူးခွံမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ ဖုန်းမှာဆိုရင်ကောကြည့်လို့ရလားခင်ဗျာ။ ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ဘယ်လိုစစ်လို့ရလဲ သိချင်လို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖုန်းကနေအကြမ်းဖျင်းစစ်ချင်ရင်တော့ Setting >> General >> About >> Model ကိုကြည့်ရင်
example (MC604LL) ဒါမျိုး စာနဲ့ဂဏန်းပေါင်းထားတဲ့ဟာတွေ့ရမယ် နောက်ဆုံးက LL ဆိုတာကတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီဖုန်းက Locked phone ဖြစ်ဖို့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သေချာပါတယ်။ နောက်ဆုံးက LL မဟုတ်ဘဲ ZA ဆိုရင်တော့ စင်ကာပူနိုင်ငံထုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် Unlocked Phone ပါ ။ JP ဆိုရင်တော့ ဂျပန်ဖုန်း Locked Phone ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်​​​ေတာ့်ဖုန်း​က​​ေတာ့ Unlock သေချာပြီ ​MD259J တဲ့။ ​
MC607KH..?? lock? unlock???
kh ကိုရီယား lock ပါ